Samsung DA-E750 Dock, Afayeen leh Kumbuyuuta Bulukaati Vacuum | War gadget
Dock Dock Samsung DA-E750, sameecad leh qalabka wax lagu buufiyo
Nacho Cuesta | | Afayeenada
Adduunyada codka waxaan haysannaa xulashooyin aan ku qancino dhammaan dhadhanka isticmaalaha. Badeecada aan kuu keenayno, ah Samsung DA-E750 Audio Dock, waa wax yar oo ka mid ah caadiga ah iyo sharad ku saabsan bixinta dhammeystir fantastik ah iyo isku xirnaan aad u dhameystiran si ay u awoodaan inay ku xirmaan ilo maqal ah.
In kasta oo muuqaalkiisu wanaagsan yahay, haddana sida ugu wanaagsan ee dekeddani ugu jirto iyada tayada codka iyo ku shubida qalabka ku saleysan tubbada faakiyuumka iyada oo Samsung ay rabto inay ku guuleysato dhawaq dabiici ah.
1 Aragtida koowaad
2 Dhageysiga muusikada DA-E750 Audio Dock
3 Amplifier oo leh tuubooyinka faakiyuumka
Isla marka aan ka saarno sanduuqa Samsung DA-E750 Audio Dock sanduuqa, waxaan arki karnaa inuu culeyskiisu aad u badan yahay (8,6 Kg) marka loo eego cabirkiisa (450x148x240 mm), wax caadi ah markaan aragno inaan haysanno laba ku hadla laba afle iyo subwoofer qaybtiisa hoose in wada, ku dar xoog of 100W RMS.
Muuqaalka muuqaalkiisu waa mid cajiib ah waana inaan dhahaa taas Weligay ma arag shey Samsung ah oo sidan oo kale u dhammaaday. Dhab ahaan jirka afhayeenka oo dhan waxaa lagu dhammeeyaa alwaax dhalaalaya muuqaal aad u qurux badan.
Xagga kore ee dekedda waxaan ku aragnaa guddiga xakamaynta oo ka kooban afar badhan si loo xakameeyo howlaha ugu muhiimsan ee alaabta. Waxaan sidoo kale aragnaa daaqad muraayad ah oo waxyar soo baxda oo aan ku arki karno labada tuubbo faakiyuum ee loo adeegsado in lagu kordhiyo calaamadaha codka.
Dhabarka dambe waxaan ku leenahay guddiga balastar jirka Taas oo aan ku aragno isku xiraha korontada, dekedda USB-ga, aqbasho maqal ah oo ku saleysan jaakad dhan 3,5 mm, dekedda Ethernet, badhanka Dib-u-habeynta iyo dekedda SAT. Haddii aan horay u sii socono, waxaan helnaa farsamo riix / dibedda taas ayaa ka baxda waxay heshay deked ay kuxirantahay 30-pin isku xirnaanta aaladaha Apple iyo microUSB loogu talagalay taleefannada kale ee casriga ah ama kiniinnada kale. Waa in la ogaadaa in badeecadani ay sidoo kale la jaan qaadi karto AirPlay, AllShare oo leh Bluetooth 3.0.
Ugu dambeyntii, haddii aan rogno Samsung DA-E750 Audio Dock, waxaan arki doonnaa inay jirto deeq-weyne subwoofer ah kaas oo daryeeli doona daboolida taranka mowjadaha ugu hooseeya.
Marka ay timaado sharraxaadda iyo isku xirnaanta, ma hayno wax aan diidno. Hadda waxaa la joogaa waqtigii la arki lahaa in qaybta maqalka ay gaarsiisan tahay heer.
Dhageysiga muusikada DA-E750 Audio Dock
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, waxaan ku xiri karnaa il kasta oo maqal ah badeecadan tan iyo markii aan xiriir la leenahay dhammaan dhadhanka. Kiiskeenna, waxaan go'aansanay inaan tijaabino borotokoolka 'AirPlay' ee Apple oo aan ku raaxeysto faa'iidooyinka ay leedahay dhageyso muusikada silig la'aan iyada oo loo marayo Wi-Fi.
Ka dib markii la sameeyo habeyn yar oo qaabeyn ah si dekeddu ugu xirmi karto shabakadeena, wax walbaa waxay diyaar u yihiin inay riixaan badhanka Play-ka oo ay ku raaxaystaan. Si aan u sameeyo tijaabada koowaad waxaan doortay mid heesta melodic, oo leh qalab kala duwan iyo cod timaha ka dhigaya mid taagan bilowgii.
Waxaan doonayaa inaan riixo batoonka Muusiga, Muusiguna wuxuu bilaabayaa inuu ciyaaro waana ogaan karnaa taas tayada codka ayaa la socota qalabka intiisa kale. Waa wax cajiib ah in la dhagaysan karo hees sidii loo abuuray, iyada oo aan aaladdaha qaar is xannibin oo aan loolan ka dhex jirin mowjadaha.
Waan dareemi karnaa dhammaan nuxurka heesta si la mid ah sidii aan ku dhageysaneynay sameecado sameecado oo tayo leh taasina waxay muujineysaa dadaalka ay Samsung ku bixisay sameynta wax soo saar wanaagsan.
Waxaan sii wadaynaa maqalka heesaha la midka ah iyo dhammaantood runti way fiican yihiin, iyadoo la siinayo dareenka ah in kooxdu ay naga ciyaarayso horteenna.
Maaddaama ay si fiican ula macaamilayso qaababkan, aan aragno haddii aan la macaamilno af-hayeenno badan ama haddii ay si fiican ula jaanqaadayso noocyada qaar marka loo eego kuwa kale. Hadda waxaan dooranayna wax bixiya a joogitaanka bass xoog badan waana meesha aan ku aragno xoogaa yar.
Samsung ma aysan dooneynin in subwoofer-ka lagu qariyo mowjadaha sare maxaa yeelay sidan ayaan ku waayi lahayn faahfaahinta heesaha aan maqli karin haddii aan haysano subwoofer aad u awood badan. Weli, waxaan ka hadleynaa 60W RMS ee awoodda bass halka inta hartay 40W RMS loo qaybiyay bartamaha iyo tweets.
Ugu dambeyntii waxaan leenahay dhawaq dheellitiran oo aan soo noqnoqodkiisu ka sarreyn kan kale. Dhageysiga muusikada Samsung DA-E750 Audio Dock wuxuu ku yaal heer kale waana taasi mid aan shaki ku jirin.
Amplifier oo leh tuubooyinka faakiyuumka
Adduunyada oo ku soo badashada transistors-ka ay u oggolaatay qaybaha elektarooniga ah in la yareeyo ugu badnaan ma aha wax caadi ah in la helo qalab sameeya tuubooyinka faakiyuumka.
Vacuum valves waxay ku xoojinayaan calaamadaha korantada iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa elektarooniga meel bannaan. Waad ku mahadsan tahay naqshadeeda, qaybtan elektaroonig ah wuxuu awood u siinayaa codka aaminnimada sare.
Xaaladda Samsung DA-E750 Audio Dock, waxaa jira laba waalka faakiyuumka oo laga arki karo daaqada muraayadda. Markay cod-weynehuhu daaran yahay, tuubooyinka faakiyuumku waxay qaataan midab liin ah oo aad u qurux badan marka lagu daro bilicsanaanta qofka hadlaya.
Waxaan wajaheynaa a ku xir xiriiro badan dhammaan kuwa doonaya inay ku raaxaystaan ​​muusikada Quruxdeeda oo dhan,
Waxaan jeclaan lahayn inaan ku aragno dekedda xiriirinta danabka qalabkii ugu dambeeyay ee Apple laakiin waxaan u maleyneynaa in Samsung ay sii deyn doonto dib u eegis badeecadeed iyada oo faahfaahintaan la hagaajiyay.
Qiimaha lagu taliyay ee ah 599 euro (in kastoo dukaamada qaarkood ay horeba u ahayd 450 euro), Audio Dock Samsung DA-E750 waa wax soo saar si weyn loogu taliyay cabirkeeda, tayada codka iyo isku xirnaanta.
Macluumaad dheeraad ah - Sonos waxay soo jeedineysaa Shaleemo Guryo wireless ah oo isku daraysa dhowr badeecadeeda
Xiriirinta - Samsung
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Afayeenada » Dock Dock Samsung DA-E750, sameecad leh qalabka wax lagu buufiyo
Miyuu leeyahay batteri ???
Maya, waa lagu xiri karaa oo keliya.
GERMAN OLAYA dijo
Qalabkan ma lagu xidhi karaa ujawaab?… Mahadsanid.
Jawaab GERMAN OLAYA
Ciyaaraha ugu xun jiilka. Volume 2
Ciyaarihii ugu xumaa ee jiilkan, mugga 1